Myanmar Famous Rocker Lay Phyu's Family Photos | Myanmar Celebrity Couple Photos
Myanmar Famous Rocker Lay Phyu's Family Photos
Myanmar Famous Rocker Lay Phyu's Family Photo
Myanmar Famous Rocker Lay Phyu's Family Son of Myanmar Rocker Lay Phyu
Lay Phyu's Family
Myanmar famous rocker : Lay Phyu's Family Photos
Photos from Facebook. Brief Biography of Lay Phyu: Lay Phyu (Real Name: Win Hlaing Soe) was born in 19 May, 1965 in Inle, Shan State, Myanmar. He went to the Mandalay University majoring in English Language. He rose to fame with his debut album Gandarya Lamin (Desert Moon) in 1992-1993. Lay Phyu and Iron Cross Band (IC) have been rocking as the best Rock Music Band in Myanmar nearly two decades now. Lay Phyu has released 13 Top Hit Solo Albums so far.
မြန်မာ ရော့အဆိုတော် လေးဖြူ ရဲ့ မိသားစု ဓာတ်ပုံလေးတွေပါ။ ADVERTISEMENT
phyulayJuly 26, 2011 at 4:03 AMလေးဖြူမှာ နောက်မိန်းမ နဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ရှိတယ်၊ မယားကြီး နဲ့ ကလေး ၂ ယောက်က စင်ကာပူ မှာနေပါတယ်။ မယားငယ်နဲ့ ကလေးကတော့ ရန်ကုန်မှာပဲ လေးဖြူနဲ့အတူ နေပါတယ်၊ReplyDeleteaung khant kyawJuly 26, 2011 at 4:53 AMမယားကြီးရဲ့အကြီးကောင်လေးက မင်းမဟုတ်လားReplyDeleteyuyusanJuly 26, 2011 at 6:24 AMဆောင်းလေးဖြူ နဲ့ တိမ်လေးဖြူ ပါReplyDeleteHtet HtetJuly 26, 2011 at 3:14 PMphyulay ပြောတာ ဖြစ်နိုင်မယ်ထင်တယ် ကြားတော့ကြားဖူးတယ် အရင်ကပုလဲကွန်ဒိုမှာနေတာလားမသိဘူးလေးဖြူနောက်ယူတဲ့မိန်းမကလေကရင်မလို့ ပြောသံကြားဖူးတယ်ကိုယ်ဝန်ရသွားမှာယူလိုက်တာလို့ ပြောကြတယ်။ReplyDeletesuJuly 26, 2011 at 8:51 PMသိတဲ့လူရှိရင် ပိုပြောကြပါအုန်း..စိတ်ဝင်စားလို့ပါ..ကြားဖူးတယ်..နောက်မိန်းမရှိတယ်လို့ ငယ်တယ်ဆိုလားပဲ...လေးကြီးက ဘာဖြစ်လို့ အဲ့လိုလုပ်တာလဲ..ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူ့ကိုတော့ အသေကြိုက်..ဟိဟိ။ReplyDeleteCinderellaJuly 26, 2011 at 9:51 PM‌လေးဖြူမိန်းမရဲ့အမည်က..မနွယ်၊စင်ကာပူမှာ..လို့‌တြော့ကားဖူးတယ်..‌နောက်မိန်းမရှိတယ်လို့‌တော့မကြားဖူးဘူး..တကယ်ကြီးလားဟင်..အဲဒါဆိုရင်‌တော့အများကြီးစိတ်မ‌ကောင်းဘူး..ကိုယ်ကြိုက်တဲ့အနုပညာရှင်ကိုအဲဒီလိုနာမည်ဆိုးကြီးမရှိ‌စေချင်ဘူး..။ReplyDeleteKOGYIKYAWJuly 26, 2011 at 10:03 PMဘာနာမည်ဆိုးကြီးလဲ...နင့်အတွက်မကောင်းပေမဲ့သူအတွက်ကောင်းတယ်..ရလို့ကတော့ရသမျှအကုန်ယူ..ဘဲရီးဂွတ်..ReplyDeletesuJuly 27, 2011 at 4:08 AMအင်း..သူက တစ်ကယ်နောက်မိန်းမလေးရှိတာပါ၊ ကော်နီနဲ့ ဖြစ်ပြီးတော့မှ အဲ့ဒီကောင်းမလေးနဲ့ဖြစ်ပြီးခုကလေးလေးမွေးထားတယ်၊ ကလေးမွေးတဲ့နေ့ ဆေးရုံမှာရောက်နေတုံး သူ့မိန်းမက စလုံးကနေပြန်ရောက်နေလို့ လေးကြီးအပြင်ထွက်ရခက်နေတာ ငိုမလိုရီမလိုနဲ့ အရပ်ကူပါလူဝိုင်းပါဖြစ်နေလို့ မျိုးကြီး၊အငဲနဲ့ အိုင်စီအဖွဲ့သားတွေပေါင်းပြီးခေါ်ထုတ်ပေးခဲ့ရတာ...အဲ့ဒါတကယ်အဖြစ်ပဲ၊ မသိတာက ကောင်မလေးအကြောင်း၊ သူဘယ်သူလဲ၊ဘယ်ကလဲဆိုတာပေါ့၊ သိတဲ့လူများပိုပြောကြပါအုန်း...လေးကြီးကို ဆန်းမစ်ပတ်ဗျူးဟိုတယ်မှာ ကောင်းမလေးတစ်ယောက်နဲ့ အားကစားလာလုပ်တာတွေ့ဖူးတယ်..သေချာမကြည့်လိုက်မိဘူး..အမှတ်တမဲ့ပဲ..မချောတာတော့သေချာတယ်...သာမန်ကောင်းနလေးတစ်ယောက်ပဲ..သူများလားမသိဘူးနော်...ဟင်း....ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူအနုပညာရယ် သူရဲ့ပွင့်လင်းရိုးစားတဲ့တာတွေကိုတော့ ကြိုက်တယ်...ReplyDeleteကောင်းဆက်လင်းJuly 27, 2011 at 5:08 AMလေးဖြူးမိန်းမနာမည်က နွယ်နွယ်သန်း။ လမ်းလျှောက်ရင် လေးဖြူရဲ့ ရှပ်အကျီင်္ကိုဆွဲပြီး တောင်ကြီးမြို့ လမ်းလယ်ကျွန်းကနေ အမြဲလျှောက်နေတဲ့ ပုံရိပ်ကို မြင်ယောင်နေသေးရဲ့....ReplyDeleteMee PyarJuly 27, 2011 at 5:43 AMPlease, DONT BELIEVE RUMORS!!!!ReplyDeletetheJuly 27, 2011 at 6:27 AMဆု ဆိုတဲ့ မိန်းမကြီးက လူအချင်းချင်း၊ ကိုယ့်နိုင်ငံသား အချင်းချင်းကို မတရားသဖြင့် တမင်ဖန်တီးပြီး၊ သို့ မဟုတ်၊ ထင်ရာတွေနဲ့အတင်းချ တဲ့ အပြင် သူများတွေကို ပါ အတင်းမပြောပြောအောင် အတင်းကြီး ဆွဲဆောင်နေတာ အရမ်းသိသာလိုက်တာ။ ဘာလို့ ဒီလောက်တောင် ဖြစ်နေရတာလဲ။ReplyDeletesuJuly 27, 2011 at 11:42 AMthe ရေ..စု ပါ..ဆုမဟုတ်ပါဘူး..သူတစ်ပါးအကြောင်းလဲ အဟုတ်ပဲနဲ့ဘယ်တုံးကမှ ရမ်းမတုတ်ဘူး..လေးကြီးအကြောင်းကို ဒီထက်ပိုသိပါတယ် ဒါပေမဲ့ ကောင်းမလေးဖက်ကသိတာမဟုတ်ဘူး..လေးကြီးအသိုင်းအ၀ိုင်င်းဖက်ကသိတာမို့လို့ ကောင်းမလေးအကြောင်းကိုမရင်းနှီးတာ...လေးကြီးက စုတို့ရဲ့လေးစားရသော အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပဲ သူဘာလုပ်လုပ် သူ့ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာပဲ..ကိုယ်တို့နဲ့ဘာမှမပတ်သတ်ဘူးလေ..သူ့မှာလဲ သူ့အိမ်တွင်းရေးပြသာနာနဲ့သူဆိုတော့လေ...သိတာလေးတွေကို နဲနဲလောက်ဝေမျှတာပါ...သူကိုနစ်နာစေအောင်လုပ်တာမဟုတ်သလို ဒီလောက်ပြောယုံနဲ့ သူ့ပရိတ်သတ်က သူကိုကြိုက်တာလျှော့သွားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ အာမခံပါတယ်...ReplyDeletettJuly 27, 2011 at 8:37 PMi saw lay phyu withawoman at yangon airport last two year.she is young and with pregancy.lay phy held her shouder and lookde like vrey kind to her.She may be his second wife.ReplyDeletemossespittJuly 27, 2011 at 10:09 PMကိုလေးဖြူ မိသားစု နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးတဲ့ Admin ကျေးဇူးပါကိုကြီးငဲ မိသားစု ကိုလည်း မိတ်ဆက်ပေးပါဦးReplyDeleteMee PyarJuly 27, 2011 at 10:49 PM@tt It's extremely true!! Because this girl is your mother. Ask your mother how she related with Lay Phyu last two years. Understand??ReplyDeletekay khaingJuly 28, 2011 at 11:13 AMသူ့ဘာ သူဘာဖြစ်ဖြစ် ကိုလေး ကိုရော သူ့ အနုပညာ ကို ရော အရမ်းချစ်။ReplyDeletesuJuly 28, 2011 at 2:05 PMi support to kay khaing'comment..ReplyDeleteCCJuly 29, 2011 at 1:25 AMကျွန်မလည်း ကိုလေးဖြူရဲ. ပရိတ်သတ်တစ်ယောက်ပါပဲ။ကိုလေးဖြူမှာ ဒုတိယအိမ်ထောင်ရှိတယ်ဆိုတာ အမှန်ပါပဲ။ကျန်ခဲ့တဲ့ ၃နှစ်အတိက ရန်ကုန်က SSC ဆေးရုံမှာ သူ.ရဲ. အမျိုးသမီးကဗိုက်ခွဲပြီး မွေးခဲ့တာပါ။ (ဓာတ်ပုံတွေ ကျွန်မဆီမှာရှိတယ်။ ပြလို.တော့ မဖြစ်ဘူးပေါ့) :Pအဲဒီ့အချိန်က ပုလဲကွန်ဒိုမှာ သူတို.နေတယ်။ကိုလေးဖြူက ရိုးသား၊ အေးဆေးပါတယ်။ SSC က တချို. ဆရာဝန်၊ ဆရာဝန်မတွေဆိုဒါ သူ.ရဲ. ဒုတိယအိမ်ထောင်ဆိုတာ ယုံတောင်မယုံကြဘူး။သားဦး၊ အိမ်ထောင်ဦးလို. ထင်နေကြတာ။ReplyDeleteCornerstoneJuly 29, 2011 at 6:31 AMmyanmarcelebrity.com လည်း facebook က photo တွေ copy လုပ်တင်နေရတာ ပင်ပန်းနေပြီထင်တယ်ReplyDeletesuJuly 29, 2011 at 8:13 AMကျေးဇူးပါ CCရေ။ တို့မြန်မာလူမျိုးအများစုကလေ ကိုယ်ချစ်ပြီ၊ ကြိုက်ပြီဆို စုံလုံကန်းပြီးတော့ မှားမှားမှန်မှန်ဘာကိုမှမမြင၊်လက်မခံတော့တတ်တာအကျင့်ဖြစ်နေကြပြီ၊ အမှန်အတိုင်းမြင်ပြီး၊အမှန်ကိုလက်ခံပြီးချစ်တတ်ကြိုက်တတ်ကြပါစေ....ReplyDeletethazinphyoJuly 29, 2011 at 9:15 AMU lay phyu isapublic icon , that does not give u guys the right to meddle into his privacy and his family life. True or not true, he is not your husband, he is not your father nor is he your friend. Through your meaningless and ruthless words, how would u think his family members, his children and his love ones would feel seeing all this unneccessary blabbering of your brainless decision? The main purpose of this photo right here is to share with everyone that Mr Lay Phyu is indeedafamily man. None otherwise, sharing is caring . People, thit sar ta yar shi kya par . ko chin sar kya bar , tu mya kaung kyaung, ma kaung kyaung ko ma pyaw kya par nae. only then you will be able to go neint ban - buddha.ReplyDeleteပျော်ချင်သူ စိတ်ချမ်းသာချင်သူJuly 30, 2011 at 10:33 PMဘယ်လိုဘဲဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်တုံးမှာ စိတ်ချမ်းသာ ချင်တာအဓိကပါ ကိုယ်စိတ်ချမ်းသာပါစေ ကိုယ်ကျန်းမာပါစေ လို့ဘုရားမှာ ဆုတောင်းနေကြပါ တခြားသူတွေရော ဘယ်လိုလဲ စိတ်ထားကောင်းရင်ကံကောင်းပါတယ် ဘေးရန်ကင်းပါတယ် လုပ်တိုင်းအောင်ပါတယ် စိတ်ချမ်းသာပါတယ် လူသားတိုင်း ကိုယ့်စိတ်အတိုင်း လိုက်လုပ်ရဲကြ ရဲ့လား သတ်တိရောရှိကြလား ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် လူဖြစ်တုံးလေး ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာ ကိုယ်လုပ်ချင်တာတွေတော့လုပ်ကြည့်ချင်တယ် တစ်ခါတစ်ခါသတ်တိမရှိတော့စိတ်ဆင်းရဲရတယ် ဖြစ်အောင်လို့ဖို့ လိုတယ်ReplyDeletekhine waiAugust 28, 2011 at 9:41 PMI don't know about Ko Lay Phyu.What I know is I like his songs and his voice so much.But when I heard about his character, I really feel sad. I want him to be perfect man.ReplyDeleteRepliesUnknownMarch 9, 2012 at 9:48 AMNo man is perfectDeleteReplyCrystalNovember 4, 2011 at 1:40 AMသူ့ရဲ့ ဒုတိယအမျိုးသမီးနံမည်က နွယ်ကျော်စိုးပါ... ပုလဲကွန်ဒိုမှာနေပါတယ်..သာလေးမွေးပါတယ်..ပန်းလှိုင်မှာမွေးတာပါ... သူ့ရဲ့ Day Nurse က ကျွန်မသားလေးရဲ့ Nurse ပါပဲ.... အမျိုးသမီးက အရင်က Grand Mee Ya Htar က Manager ပါ...ReplyDeletenaughty girlNovember 26, 2011 at 2:50 AMအဲ တခုတော့သိတယ်.. ဘာလဲဆိုတော့ .. အဲ့ဒီ နောက်မိန်းမ ဆိုတဲ့ အမ ကို အငယ်လေး လို့ ချစ်စနိုးခေါ်တာကို..ကိုယ်တိုင်ကြားပြီးကိုယ်တိုင်မြင်တာပါ..သူနဲ့သက်ဆိုင်သူတွေကလဲအဲ့လိုဘဲခေါ်တယ်..အမ ကချောတယ်လဲမဟုတ်ဘူး..မချောဘူးလဲမဟုတ်ဘူးကြည့်ကောင်းပါတယ်.. ဘယ်လိုဘဲဖြစ်ဖြစ် သူ့အနုပညာကိုတော့လေးစားပါတယ်..သူဘာသာသူကျွေးနိုင်လို့ယူတာ ဘယ်နှစ်ယောက်ယူယူပါ..တခုဘဲသူ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကမတားဘဲအလိုက်သင့်လက်ခံပေးနေတာကိုတော့ မကောင်းဘူးလို့မြင်တယ်...ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာ IC လူတွေနဲ့ သူ့ အမျိုးဖြစ်တဲ့..သချင်းရေးဆရာတယောက်ကိုပါဆိုတာပါ...ReplyDeletemy loverMay 18, 2012 at 5:12 AMI like lay phyu ! That only I know . I don't care anything !ReplyDeletehenry ayekoJune 4, 2012 at 12:50 AMme tooReplyDeletesaithetkhaingOctober 15, 2012 at 11:26 AMI like lay.ReplyDeletepyapontharFebruary 4, 2013 at 2:56 AMသူဘာပဲဖြစ်နေ...သူ့ရဲ့အနုပညာကတော့ယုတ်လျော့မသွားပါဘူးဗျာ,..အကိုတို့ အမ တို့ကသူ့ကိုကြိုက်ိုတာလားသူ့အနုပညာကိုကြိက်တာလား---ကျနော်ကတော့သူ့အနုပညာကိုကြိက်တာဗျ------ReplyDeleteNaing LayMay 13, 2013 at 4:30 AMကိုလေးဖြူ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မင်းတိ်ု့ အပူမပါဘူး...မင်းတို့ အားမပေးလဲ ငါထာဝရ အားပေးသွားမှာပဲ...သူတစ်ပါးကို အပြစ်ပြောမနေနဲ့ ကိုယ်အပြစ်ကိုယ်ကြည်ကြ...မင်းတို့ ကိုလေးဖြူ ကိုပြောရအောင် မင်းတို့ သူလောက် အဆင့်ရှိလို့လား...ငါအခု လိုပြောတာကို မကျေနပ်ရင်လဲ သေလိုက်...ငါက ကိုလေးဖြူကို ထာဝရ အားပေးနေမဲ့ကောင်ကွ...ငါနာမည်ကတော့ နိုင်လေး...ငါဖုန်းနံပတ်က ၀၉၄၂၀၂၈၇၄၈၅...အလုံမှာနေတယ်...မကျေနပ်လို့ ရှင်းမယ်ဆိုရင်လဲရတယ်... ReplyDeletenksMay 28, 2013 at 11:05 PMThe truth is I am Nwe Kyaw Soe and yes we are second marriage. We haveababy daughter called Let Ya Lay Phyu born in Pan Hlaing Hospital. Her birthday is 20th May next to Ko Lay's birthday. Ko Lay Phyu isacaring and loving father. We love each other very much. He called me Nge Lay because my nick name is Mie Ngai.ReplyDeletenksMay 28, 2013 at 11:07 PMWe don't publish much pictures because we don't want to harm some people. Thank you for understanding.ReplyDeleteAnonymousAugust 19, 2013 at 10:56 PMက်ို​လေးက်ိုထာဝရ အား​ပေး​နေမယ်​ ReplyDeleteRepliesKhinthatwaiAugust 19, 2013 at 10:58 PM:-)DeleteReplykhinsayarlayAugust 19, 2013 at 11:04 PMသူများအပြစ်​​တွေကိုပဲမမြင်​ပါနဲ့သူ့လို​အောင်​မြင်​တဲ့သူဖြစ်​ရင်​ကိုယ်​ကိုတိုင်​ဘယ်​လိုအမှားမျိုး​တွေဖြစ်​နိုင်​မလဲဆိုတာမသိနိုင်​ဘူး​လေ ဒါ​ကြောင့်​ကိုယ်​ချင်းစာကြည့်​ပါ ။သူ့ကိုအား​ပေးတဲ့ပရိတ်​သတ်​မဟုတ်​ရင်​သူ့အ​ကောင့်​ထဲကို​ယောင်​လို့​တောင်​ဝင်​ မလာပါနဲ့ ။ပြသာနာတိုင်းမှသူ့အ​ကြောင်းနဲ့သူရှိတာပါ ပြစ်​တင်​ကဲ့ရဲ့ မယ့်​အစား သူ့လို​တော်​တဲ့​အဆို​တော်​ ကို​တန်​ဖိုးထားပြီး ​လေးစား​ပေးပါ ဘယ်​သူ​တွေဘာ​ပြော​ပြော ညီမ က ​တော့ ကို​လေးဖြူကို အမြဲ တမ်း အား​ပေး​နေမယ်​ ။ ကု​လေးဖြူ ထာဝရ ​အောင်​မြင်​ပါ​စေ။ReplyDeleteAnonymousSeptember 9, 2013 at 8:33 PMi really want to beagood father................ReplyDeleteAnonymousOctober 25, 2013 at 6:11 AMလေးဖြူ ဟာ ပါရမီရှင် တစ်ယောက်ပါ။ဒါပေမယ့်မျှောလိုက်နေတဲ့ပါရမီရှင်ပါ။လေးဖြူ ဆိုတာမြန်မာ့ ရော့(ခ်) သမိုင်းမှာအကောင်းဆုံးအဆိုရှင်ပါ။အဆိုရှင်ထက် အသံပိုင်ရှင်ဆိုပိုမှန်ပါတယ်။ဒါပေမယ့်ဘာမှကြိုးစားဖန်တီးတာမတွေ့ရပါဘူး။ကိုငှက်ထက်သူအောင်မြင်ပါတယ်၊ ဒိုးလုံးထက်လည်းအများကြီးသာပါတယ်။တကယ်စိတ်မကောင်းစရာကောင်းတယ်ဗျာ သူဖန်တီးတာလေးကို ခန်းခန်းနားနား လေးမြင်ချင်တယ်။ အယ်ဖြူ မရှိတော့.လင်းလင်း ကိုမှီတယ်။ ဇော်လတ် သီချင်းတွေ ကလည်းနည်းနည်းပေါနေပြီ.။လေးဖြူ မသေခင်တစ်ပုဒ်လောက်ဖြစ်ဖြစ် လှလှပပလေး လုပ်စေချင်တယ်ဗျာ၊ReplyDeleteAdd commentLoad more...